Arsenal Oo Guul-darro Qadhaadh Loo Xambaarisay, West Ham Oo 13 Sano Kaddib Ku Damaashaadday Gunners Iyo Unai Emery Oo Ku Jabay Kibirkii Uu Kula Kacay Mesut Ozil – Cadalool.com
Arsenal Oo Guul-darro Qadhaadh Loo Xambaarisay, West Ham Oo 13 Sano Kaddib Ku Damaashaadday Gunners Iyo Unai Emery Oo Ku Jabay Kibirkii Uu Kula Kacay Mesut Ozil
January 12, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Arsenal ayaa guuldarro xanuun badan kala soo laabatay kooxda West Ham United oo ay ku booqatay garoonkeeda London Stadium, Hammers oo kulankan hal gool ku adkaaday ayaa goolka ka helay 19 jirka Declan Rice.
Guushan ayaa ahayd mid micno gaar ah u samaynaysa West Ham United maadaama oo ay guushii ugu horreysay iyaga oo marti ah ka gaadheen Arsenal kaddib mudo 13 sano ah.
Shaxaha Labada Kooxood Ee Kulanka:
Falanqaynta Guud Ee Ciyaarta:
West Ham United ayaa heshay fursada ugu horreysay ee ciyaarta daqiiqadii 6-aad ee ciyaarta, Kabtanka kooxdaas ee Mark Noble ayaa darbad la beegsaday goolka Arsenal laakiin waxa si sahlan ku qabsaday goolhaye Bern Leno.
Arsenal ayaa markeeda qaaday weerar waxaana fursadii ugu horreysay ee xaqiiqo ah kulanka ka sameeyay Lacazette kaas oo isaga oo gees adag taagan haddana kubad xoogan ku laagay goolhaye Fabianski oo badbaadin adag sameeyay.
Arnautovic iyo Nasri ayaa si wadajir ah isku dhiibtay kubadda, Samir Nasri ayaa noqday xiddiga kubadda darbeeyay waxana uu wax yar u mariyay kubadda birta goolka isaga oo ku dhawaaday inuu taabto shabaqa kooxdiisii hore.
West Ham United ayaa fursad kale oo halis leh abuurtay, Markale Arnautovic, Nasri iyo Anderson ayaa isku dhiibtay kubadda, Ugu dambayn Anderson ayaa isku dayay inuu goolka Gunners beegsado laakiin isku daygiisa ayaan bar-tilmaameed saxan noqonin.
Daqiiqado kahor dhammaadka qaybta hore, Daafaca West Ham Anderson ayaa kubad gees kalaad ah soo tuuray waxaana madaxeeyay daafaca Declan Rice kaas oo qarka u fuulay inuu ciyaarta ka dhigo 1-0 laakiin isku dagyiisa ayaa wax yar u maray goolka goolhaye Fabianski.
Qaybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhammaatay 0-0 ay labada kooxood ku kala bixi waayeen , Arsenal ayaa 25-ka daqiiqo ee ugu horreeyay u muuqata kooxda halista badan halka qaybaha dambe ee qaybta hore ay halista abuuraysay West Ham.
GOOAL: West Ham ayaa gool kula soo laabatay ciyaarta, Da’yarkii qaybtii hore fursada dhaw khasaariyay ee Rice ayaa markan meel sarre oo goolka ah ka galiyay kubad uu ka helay Samir Nasri, Goolkan ayaa ahaa midkii ugu horreeyay ee uu Rice u dhaliyo kooxda waaweyn ee West Ham.
intaa kaddib ciyaarta ayaa noqotay mid sidii hore ka xoogan, Tababare Emery ayaa ciyaarta ka saaray Mustafi isaga oo soo galiyay Ramsey, West Ham ayaa halkeeda kasii wadatay ciyaarta fiican halka Arsenal ay fursado halis badan abuurtay.
Intaa kaddib Arsenal ayaa heshay laba fursadood oo ay goolka ku gaadhi karaysay balse waxa labadaba khasaariyay weeraryahan Aubameyang oo markasta dhinac marinayay goolka Hammer kubaddaha uu laago.
Markale Gunners ayaa weerar culus soo qaaday, Alex Iwobi ayaa kubad uu ka helay Aaron Ramsey meel dhaw kaga tuuray goolka koxda martida loo ahaa walow uu ku fashilmay inuu goolka ku aadiyo.
Intaa kaddib labada dhinac ayaa weerar joogto ah isku qaadayay laakiin waxa xusid mudan in aysan marnaba labada dhinac abuurin wax fursado ah oo halis ah.
Dhammaadkii ciyaarta Arsenal ayaa la timid gool loo fishay midka bar-bardhaca laakiin calanwadaha kulanka ayaa qabtay garab dhaaf uu ku jiray Saed Kolasinac.
Ugu dambayn, Kulanka ayaa kusoo dhammaaday guul 1-0 ah oo ay guushu raacday kooxda West Ham United, Ciyaartan ayaana ah mid uu goolka madiga ah dhaliyay Declan Rice.